Njem South Africa | Akụkọ Njem
Njem south africa
Maria | | Afrika, njem
Ọ bụrụ n’ịgabeghị na mpaghara Africa na mbụ, njem ị ga South Africa nwere ike ịbụ nnukwu ụzọ iji hụ ebube Africa. N'ebe ahụ, ọdịdị mara mma, ụmụ anụmanụ mara mma na ọdịbendị na-atọ ụtọ na-echere onye njem.
South Africa bụ mba dị anya nke kwesịrị ịkwado tupu oge eruo na iji ndụmọdụ ụfọdụ gbasara nchekwa. Nke a bụ ihe niile ịchọrọ ịma maka njem ị ga South Africa.
1 Kedu oge kacha mma iji gaa South Africa?
2 Kedu ihe ị ga-ahụ na South Africa?
2.3 Ogige Ugwu Kruger
2.4 Cape nke Ezi Olileanya
3 Achọrọ m visa?
4 Vgba ọgwụ mgbochi ọrịa iji gaa South Africa
Kedu oge kacha mma iji gaa South Africa?
Oge ọ bụla n’afọ dabara adaba ileta obodo ahụ n’ihi na ịnọ na mpaghara ndịda, oge a na-emegide nke Europe.
N'oge opupu ihe ubi na South Africa na-ewe ọnwa Septemba ruo Nọvemba ma ọnọdụ okpomọkụ na-arị elu n'ụbọchị. Ọ bụ oge na-enye anyị ohere ịhụ ihu ala jupụtara na okooko osisi dị ka nke West Coast National Park, ihe dị ka kilomita 90 site na Cape Town.
Oge okpomọkụ na-ekpo ọkụ ma na-enwe mmiri ozuzo na égbè eluigwe nwere ike ime. Ọ na-amalite site na Disemba ruo Machị ma ọ bụ oge dị mma iji nọgide na-anụ ụtọ okike na ohere nke ụsọ oké osimiri na-enye.
Mgbụsị akwụkwọ na-ewere ọnọdụ site na Eprel rue Mee ma ụbọchị ahụ na-acha anwụ na ehihie na abalị na-ekpo ọkụ, na-akpọ oku maka ije na ọrụ ndị dị n'èzí.
N'ikpeazụ, oge oyi na South Africa akọrọ ma ọ bụghị ezigbo oyi. Ọ bụ oge kachasị mma ịnụ ụtọ fauna ma kpuchie ọnwa nke June ruo Septemba. Ọ bụkwa oge dị mma maka egwuregwu n'èzí na atụmatụ ndị ọzọ.
Kedu ihe ị ga-ahụ na South Africa?
Johannesburg bụ obodo kachasị ukwuu na South Africa ma ewere ya dịka isi ego na akụ na ụba nke mba ahụ, yana ịbụ otu n'ime ọgaranya na ọtụtụ ọdịbendị.
Ejikọtara akụkọ kachasị ọhụrụ na South Africa na apartheid. Emeela ọtụtụ ihe nkiri, edewokwa ọtụtụ akwụkwọ banyere ya, mana ọ nweghị ihe dịka ileta Museumlọ Ngosiputa Ele ma ọ bụ agbataobi Soweto (mpaghara ojii kachasị n'ọnụ ọgụgụ ebe ndị obodo a lebara anya n'oge ọchịchị na nke Nelson biri na mbụ). na Desmond Tutu) iji mụta banyere isi nke a n'akụkọ ihe mere eme mmadụ. N'ezie, ị nwere ike ịga na ụlọ Nelson Mandela ma ọ bụ ụlọ ụka Regina Mundi, ebe a ka nwere ike ịhụ fọdụrụ nnwere onwe nnwere onwe.
Taa Soweto bụ mpaghara njem nleta jupụtara na mmanya, ụlọ ahịa na họtel. Otú ọ dị, e nwere ebe a ga-eleta na mpaghara ma ọ bụ zere ya.
Ebe ndị ọzọ na-adọrọ mmasị ịga leta na Johannesburg bụ Nelson Mandela Square (nke akpụrụ akpụ nke ihe karịrị mita isii), ama egwuregwu Soccer City (ebe Spain meriri 2010 World Cup) ma ọ bụ Carlton Center Office Tower (ụlọ elu kachasị elu na Africa nwere iri ise) ala na 223 mita elu na echiche kachasị mma nke Johannesburg).
A na-eche na ọ bụ otu n'ime obodo kachasị maa mma na South Africa. Ihe omuma a mere ka obodo buru ibu nke ihe di iche, nke di na gburugburu ebe obibi di egwu. Na mgbakwunye, obodo ahụ hụrụ ọmarịcha ihu igwe ya n'anya na afọ niile, osimiri ya na-acha ọcha, ọmarịcha mmanya mmanya ya na nri dị iche iche ya.
Offọdụ n'ime atụmatụ ndị kachasị adọrọ mmasị ị ga-eme n'oge nleta na Cape Town bụ njem mmụta na Mountain Mountain, ugwu dị larịị nke bụ akara nke obodo ahụ. Na echiche ya dị iche iche ị nwere ike ịse foto kachasị mma nke Cape Town, ọdịda anyanwụ ma ọ bụ oké osimiri n'oge ije ma ọ bụ picnic.
Mgbe ị gara Ugwu Mountain ị nwere ike ịga Kirstenbosch Botanical Garden, nke a na-ewere dị ka otu n'ime ihe kachasị mma n'ụwa. Ebe ọzọ ị ga-eleta n'obodo a bụ agbataobi Malay nke Bo-Kaap, nwere ihu ụlọ ya na agba dị iche iche.
Jide n'aka na ị ga-agagharị n'okporo ụzọ Long Street na-ewu ewu na ụlọ ndị mara mma nke Victorian ma ọ bụ n'akụkụ Osimiri Victoria. Nleta ọzọ a tụrụ aro na Cape Town bụ Robben Island, agwaetiti a tụrụ Nelson Mandela na ya afọ 18.
Foto | Picabay
Ogige Ugwu Kruger
Nke a bụ egwuregwu egwuregwu kachasị mkpa na South Africa na ogige mba kachasị mma na mba ahụ gaa na safari wee hụ ebe a na-akpọ Big Five nke okike okike (odum, agu, agu ohia, enyi na anwuru).
Abịa n’ihe metụtara safari, gbalịa ịgbachi nkịtị mgbe anụmanụ nọ iji gbochie ha ịtụ ụjọ ma gbapụ. Yiri uwe mara mma na agba ndị na-anaghị adọta uche dị ka aja aja ma ọ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Chebe onwe gị site na anyanwụ, drinkụọ mmiri ma jiri ọgwụ na-egbochi ahụhụ.
South nke Afrika, na njedebe nke South Africa, Cape nke Good Hope, otu n'ime ebe pụrụ iche n'ụwa maka ikuku pụrụ iche ya.
N'ebe a, ị nwere ike ịchọta ụsọ osimiri aja ọcha na ọbụna enyí nnụnụ ma ọ bụ penguins. Ọ bụrụ n ’njem gị gaa South Africa ga-eme n’agbata June na Nọvemba, ọ nwere ike ịbụ ahụmịhe a na-agaghị echefu echefu ị ga-eleta Hermanus (obodo whales) na Gaansbai (ụlọ nke nnukwu shark ọcha). E si n’obodo a nwee ụgbọ mmiri maka ndị dị iche iche na-enwe mmasị na azụ shark ndị akpọchiri n’ime onu.
Ikwesighi inweta visa ma ọ bụrụ na ebumnuche nke njem gị na South Africa bụ njem na ị gaghị anọ na obodo ahụ karịa ụbọchị 90. Agbanyeghị, onye njem ahụ ga-enwerịrị paspọtụ ziri ezi tupu ọ gawa South Africa ma ga-enwerịrị ihe abụọ achọrọ: ụbọchị ngwụcha nke opekata mpe ụbọchị 30 mgbe ụbọchị ọpụpụ si mba ahụ nwere peeji abụọ ọhụụ.
Vgba ọgwụ mgbochi ọrịa iji gaa South Africa
Achọghị ka ha gosi akwụkwọ ịgba ọgwụ mgbochi iji banye Spain site na mba ahụ, agbanyeghị na enwere ụfọdụ ọgwụ mgbochi dị ka ịba ọcha n'anya A na B, tetanus ma ọ bụ ịba ahụ ọkụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Afrika » Njem south africa